ukuqashelwa uhlelo abangane nezitha ngosizo izithombe isinyathelo ezikhathini zasendulo. Ngenkathi eziMpini Zokholo kuya steel zempi, amabhanela amasosha izihlangu isicelo izimpawu ngabanye Knights umehluko. umsebenzi wayo kwakuwukuba namabhomu yehlukaniswe isitha empini comrade-e-izingalo. Njengoba sekunama-ukuthula Military Merit Knights akazange alahlekelwe ukuhlobana, ngakho emnyango endlini noma enqabeni, ukulwa ukuze uhlanganyele, futhi manje ijazi umndeni ka izingalo iqhawe, noma umsunguli clan. Wabuye ehlotshisiwe izingubo zemikhosi futhi zonke izinto ezihlobene ihogela ithonya umnikazi, bambeka uqophe ukubhala siqu.
Ngakho, esekelwe sezakhiwo of Crest izingalo umndeni nomndeni akha knight inkosi. Isitembu nge isithombe sakhe zonke izivumelwano eqinisekisiwe futhi baqinisekisa ubuqiniso imibhalo kanye nempahla emazweni okuqondene ifa. Izimpawu zokuqala Chivalry lasetshenziswa the board, ngakho ukuphula le siko ayiqalanga ngokwenza ingxenye ebalulekile heraldry.
Nakuba lwamaSlav zazingakapheli Zenkolo, kodwa ukuphila kwabo eduze zithandelana lwezwe, obonakaliswe nezimpawu ezikhethekile. Ngakho-ke, yileso naleso sewaba yokhokho, ukugcina ekuhluphekeni, futhi eveza yonke impahla, kusukela ingcebo ziphethe amathuluzi yezolimo kanye nezitsha. Futhi njengoba wonke umkhaya abadumile Slavic angasuselwa uhlobo Rurik, iningi labo dvuzubets - lokhu lesigceme nomndeni elingenamikhono izingalo. Ngaphezu kwalokho, ngamunye okuyinto amagatsha zalesi ubukhulu uhlobo okushintsha ngomfanekiso wakhe, okwenza kube sithi ukuhluka kwabanye,
Abahlukile bidentate umndeni elingenamikhono izingalo ku lwezimpawu kwesikhulu izinhlamvu waqinisekisa nemilayezo, zemali yakhe kubalwa. Alexander saseNevsky ukungezwa lomgadi walo isithombe ngomkhonto, elimelela eyodwa version zenkosi, futhi ngakolunye - saint abanesibindi, owashonela yokholo - Georgiya Pobedonostsa.
Nokho, akekho Lancer noma ezimbili-prong imikhaya elingenamikhono izingalo Romanovs ngokwako Ayibalwa. Futhi isizathu ukuthi, njengoba asho isiFulentshi, ungowesifazane - umka autocrat Russian. Prince Ivan III langena liyindawo dynastic, ukuthatha sibe umkakhe isihlobo kombusi WaseByzantium Sofyu Paleolog. Futhi umkhaya wabo elingenamikhono izingalo ehlotshiswe ukhozi ezimbili engumondli. Ngemuva kokuwa eByzantium Ivan III engena ilungelo lokuthola ifa amatshwayo WaseByzantium. Moscow ubukhulu, ngokuvumelana zoMbuso WaseRoma uMbuso ePoland, evunywe ilungelo lokuthola ifa. isimo Russian waqala ukubiza ngokwayo Okwesithathu eRoma. Ngakho, ukhozi ezimbili ephethwe "Wakhumula" banner isimo eMoscow.
Kuyinto intela Prince Ivan III, uye waqhubeka umndeni elingenamikhono izingalo nge umfanekiso umgibeli, njengoba kwakunjalo Ukusetshenziswa kwezimpawu isimo WaseByzantium ukhozi kabili ephethwe, bekholelwa ukuthi ngaphansi lesi sibonakaliso kufanele hlanganani zonke ezimele ubukhulu Russian.
Ngemva kweminyaka ecishe ibe ngamakhulu amabili namashumi amabili, lapho isihlalo sobukhosi ihlala omele lokuqala Romanov lwamakhosi, e ukhozi kabili ephethwe unesinye, umqhele lwesithathu. Uphatha le inseparability zezitho Asian futhi zaseYurophu of Russia kanye Umqhele uyazisa zintathu principalities yakhe yeSiberia, Kazan bese Astrakhan.
Namuhla heraldry ngenkuthalo ukungena mkhakha womsebenzi ibhizinisi, ngakho lapho izifanekiselo yenkampani. Sekuthanda imfashini ezincwadini, nokusetshenziswa ekuphileni kwansuku zonke futhi imikhakha yamasiko umphakathi. Abaningi ukudala amajazi abo izikhali kwezindlu, amaqembu ka lamasonto endawo. Njengoba singabona, heraldry - nakho okuthakazelisayo kakhulu.
Umkhaya Resources - kuyini? izibonelo Lesitshalo